Villa-Alpenblick 12 Abantu
Ukupaka kulula kunye neemoto ezininzi phambi komnyango.
Indlu yethu ikumgama wokuhamba kwi-ski lift. Unxibe iibhutsi zakho zokutyibiliza ezishushu ngokumangalisayo egarajini kwaye uhambe ngesikhephe sakho egxalabeni ukuya kwindawo yokutyibiliza. (evulwa ekuqaleni kukaDisemba ukuya phakathi kuMatshi)
Unyaka wonke ungayonwabela imbonakalo entle kwibalcony yethu enkulu enelanga kwaye uthathe uhambo oluhle ukusuka kumnyango wangaphambili.
Ngaphakathi kukho ikhitshi elikhulu, apho lihlala lipholile emva kwesidlo sangokuhlwa. Igumbi lokuhlala lineebhedi ezi-2 ezinkulu zesofa. Kumgangatho ophantsi unegumbi lokulala elikhulu elinebhedi ephezulu kancinane ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elincinci elineshawa kunye nendlu yangasese. Kukho nendlu yangasese yesi-2 kunye negumbi lokulala elincinci elinebhedi ephindwe kabini.
I-staircase ephangaleleyo ikhokelela kwi-attic, eyahlulwe kwii-2 "amagumbi". Ngazo zombini ezona mfihlo.
Kuzo zombini kukho igumbi lokuhlambela elikhulu elinebhafu, ishawa, iWC, ibhidet kunye neesinki ezi-2. Kwakhona kuzo zombini unegumbi lokulala elineebhedi ezi-2.
Kwelinye icala kukho ibhedi enkulu yesofa kwiattic kwaye kwelinye icala kukho iibhedi ezi-2 kwiattic.
Kwi-attic, umzekelo, abantu abadala abayi-8 kwaye mhlawumbi i-1/2 yabantwana abancinci banokulala ngokukhululekile.
Kwelinye ifulethi kukho ibhedi yesofa ebanzi kunye negumbi lokuhlambela
Sele ndikhankanyile into malunga nommandla ongasentla, kodwa okwangoku malunga nomoya wobuhlobo, owenza loo ndawo ibe nomtsalane. Kwiindawo zokutyela usoloko uncediswa ngabanini kwaye xa ndifika eTrefpunkt okwesi-2 kwacaciswa kum ukuba ngoku singabahlobo kwaye siza kukhe sibene snap kunye ngaphambi kokuba ndigoduke. Akukho nto inyanzelekileyo, kodwa ukuzonwabisa okuzenzekelayo.
Lo ngumzekelo ophawula umoya ojikeleze intaba yonke. Ngoku ndineendwendwe eziye zahlala iminyaka kwaye zisafuna ukujonga kwenye indawo amaxesha ambalwa, kodwa ngoku eyona nto ifuna ukubuya kumoya okhethekileyo.
Obu buchule bukwabonakala kumaxabiso. Uhlawula i-10 ukuya kwi-15 ye-Euro ngaphantsi komntu ngamnye ngosuku ngokuphakamisa i-ski kunezinye iindawo, ngaphandle kokutsiba kwi-skiing fun, kuba umgangatho wemithambeka uphezulu! Bala nje ukuba yintoni eyenza umahluko kwiqela lakho lonke kwaye ungatya yonke imihla kumahluko wexabiso!
Abaphathi bethu bahlala kufutshane, kodwa ndingasoloko ndifumaneka ngomnxeba ukuze ndikuncede.
Sanele kuphela xa unjalo.